Colon cancer (အူမကြီးကင်ဆာ) - Hello Sayarwon
Colon cancer (အူမကြီးကင်ဆာ)
Dr. Kaung Thar မှ ရေးသားသည်။ 18/12/2019 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်|လက္ခဏာများ|အကြောင်းရင်းများ|ဖြစ်နိုင်ခြေများ|ရောဂါအဖြေရှာခြင်းနှင့် ကုသမှု|လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အိမ်သုံးကုထုံးများ
Colon cancer (အူမကြီးကင်ဆာ) ကဘာလဲ။
အူမကြီးကင်ဆာဆိုသည် အူမကြီးတွင်ဖြစ်သောကင်ဆာတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး အစာချေစနစ်၏ အောက်ပိုင်းတွင်ရှိသည်။ စအိုကင်ဆာသည် အူမကြီး နောက်ဆုံး လက်ခအနည်းငယ်တွင်ဖြစ်သောကင်ဆာဖြစ်သည်။ တခါတရံတွင် တူတူပေါင်းဖြစ်ပြီး အူမကြီးစအိုကင်ဆာဟုခေါသည်။
များသောအားဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာတွင် သေး၍ကင်ဆာမဖြစ်သေးသောဆဲလ်များစုပုံမှု အဆီအိတ်မှဖြစ်သောအလုံးဖြစ်မှုမှစတင်သည်။ အချိန်ကြာသည်နှင့်ထိုအလုံးမှ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်လာသည်။
Colon cancer (အူမကြီးကင်ဆာ) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Colon cancer (အူမကြီးကင်ဆာ) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဝမ်းသွားသည့်ပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်း။ ဝမ်းချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ဝမ်းလျောခြင်း နှင့် ဝမ်းမာမှုပျော့မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်း။ ထိုအရာများသည် လေးပါတ်လောက်ထိကြာတတ်သည်။
ဗိုက်တောက်လျောက်နာနေခြင်း ဥပမာ အောင့်ခြင်း လေထိုးခြင်းသို့မဟုတ် နာခြင်း
အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်သောအများစုတွင် စောစီးစွာရောဂါလက္ခဏာမပြတတ်ပါ။ ရောဂါလက္ခဏာစပြချိန်တွင် ကင်ဆာအရွယ်အစား နေရာအမျိုးမျိုးရှိနေနိုင်သည်။
သင့်ဆီမှာအထက်ဖော်ပြပါ ရောဂါလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုခုများရှိနေမယ်ဆိုရင် ဒါမှမဟုတ် မေးခွန်းတစ်ခုခုရှိနေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ။ လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓါကိုယ်တုံ့ပြန်မှုဟာမတူညီနိုင်ပါဘူး။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံးလဲဆိုတာကိုသင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာကအကောင်းဆုံးပါပဲ။
Colon cancer (အူမကြီးကင်ဆာ) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
များသောအားဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်စေသောအကြောင်းအရင်းအားမသိပါ။ ဆရာဝန်များမှ အူမကြီးရှိကျန်းမာသောဆဲလ်များ၏ ဒီအန်အေ အမှားပေါ်လာခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုကြသည်။
ကျန်းမာသောဆဲလ်များမှ ပုံမှန်ပွား၍ကွဲပြီး ခန္ဓါကိုယ်ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ဆဲလ်ဒီအန်အေပျက်ဆီးသွားရာမှ ကင်ဆာဖြစ်လာနိုင်သည်။ ထိုဆဲလ်များဆက်ပွားနေပါက ဆဲလ်များစုပုံလာပြီး အကျိတ်ဖြစ်လာနိုင်သည်။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့် ကင်ဆာဆဲလ်များပွားပြီး ပုံမှန်တစ်သျူးများထဲဝင်ကာ ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ကင်ဆာဆဲလ်များခန္ဓါကိုယ်အစိတ်အပိုင်းအသီးသီးသို့ပျံသွားကြသည်။
ငါ့ဆီမှာ Colon cancer (အူမကြီးကင်ဆာ) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အူမကြီးကင်ဆာ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အသက်ကြီးခြင်း။ အသက်၅၀ကျော်တါင်အများဆုံးဖြစ်တတ်သည်။ အသက်ငယ်သောသူတွင်တွေ့နိုင်သော်လည်းရှားသည်။
အာဖရိကန်နှင့် အမေရိကန်လူမျိုးများ။ အခြားလူမျိုးများထက်ဖြစ်နှုန်းပိုများသည်။
အူမကြီးစအိုကင်ဆာ သို့မဟုတ် အလုံးရှိခဲ့ဘူးခြင်း။ ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့ဘူးပါက နောက်ပိုင်းတွင်ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းပိုများသည်။
အူများယောင်ခြင်း။ နှာတာရှည်အူယောင်ခြင်းရောဂါများက ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းကိုပိုများစေသည်။
မိသားစုတွင် အူမကြီးကင်ဆာရျိခြင်း။ သင့်မိဘ သို့မဟုတ် ညီအကိုမောင်နှမတွင် ရှိပါက ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ မိသားစုတစ်ယောက်အထက်တွင် အူမကြီးသို့မဟုတ် စအိုကင်ဆာရှိပါက သင့်တွင်ဖြစ်နှုန်းပိုများသည်။
အမျှင်ဓါတ်နည်းသော အဆီဓါတ်များသောအစာများစားခြင်း။ အူမကြီးကင်ဆာနှင့်စအိုကင်ဆာသည် ထိုအစာများစားခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ လေ့လာချက်များကအဖြေနှစ်မျိုးကိုဖော်ပြသည်။ အချို့လေ့လာချက်များက အသားစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုလည်းဆိုသည်။
လှုပ်ရှားမှုနည်းခြင်း။ လှုပ်ရှားမှုလုပ်ပေးခြင်းက အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်နှုန်းကိုကျစေသည်။
ဆီးချိုရှိခြင်း။ ဆီးချိုရှိသူများနှင့် အင်ဆူလင်အား မသုံးနိုင်သောသူများတွင် ပိုဖြစ်နိုင်သည်။
အဝလွန်ခြင်း။ အဝလွန်ခြင်းသည် ပုံမှန်အလေးချိန်ရှိသူထက် အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်နှုန်း ကင်ဆာနှင့်သေနှုန်းပိုများသည်။
ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း။ ဆေးလိပ်သောက်သူများတွင် အူမကြီးကင်ဆာပိုဖြစ်နိုင်သည်။
အရက်သောက်ခြင်း။ အရက်များများသောက်ပါကလည်း အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်နိုင်သည်။
ကင်ဆာအတွက်ဓါတ်ရောင်ခြည်ပြခြင်း။ အရင်ကဖြစ်ဘူးသောကင်ဆာအတွက် ဝမ်းဗိုက်အားဓါတ်ရောင်ခြည်ပြခြင်းများရှိပါက ကင်ဆာပိုဖြစ်နိုင်သည်။
Colon cancer (အူမကြီးကင်ဆာ) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
အူမကြီးကင်ဆာဟုအတည်ပြုနိုင်ရန်ဆရာဝန်မှမေးမြန်းမှုများစမ်းသက်မှုများလုပ်လိမ့်မည်။ အူမကြီးမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း သို့မဟုတ် ဘယ်ရီယမ်အီနားမား ထိုး၍ ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့် အတည်ပြုနိုင်သည်။
အူမကြီးမှန်ေဲပါင်းကြည့်ခြင်းတွင် ကင်မရာတပ်ဆင်ထားသော ရှည်၍ပျော့ပြေင်းသောပြွန်အား စအိုအတွင်းမှထည့်ပြီး အူမကြီးအားကြည့်သည်။ အကယ်၍ အလုံးကိုအူမကြီးတွင်တွေ့ပါက ဖယ်ထုတ်ပြီး အသားစအား ရောဂါဗေဒဆရာဝန်အားပို့သည်။ အသားစကို အနုကြည့်မှန်ပြောင်းအောက်တွင်ကြည့်၍ကင်ဆာဖြစ်နိုင်သည် မဖြစ်နိုင်သည်ကိုဆိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဘယ်ရီယမ်အီနားမား သည် လုပ်ဆောင်ချက်များမစမီ လူနာအား အစာရေကို နာရီများစွာမစားမသောက်စေပါ။ ဘယ်ရီယမ်ပါသော အရည် ကို စအိုမှတစ်ဆင့် အူမကြီးသို့ထိုးသွင်းသည်။ ဘယ်ရီယမ် အူမကြီးအတွင်းသို့ရောက်ပါက အူမကြီးနှင့် စအိုအား ဓါတ်မှန်ရိုက်သည်။ ဓါတ်မှန်တွင် အလုံးအကျိတ်များရှိသောနေရာတွင် အနက်ရောင်ပြ၍ ဘယ်ရီယမ်နေရာများမှ အဖြူရောင်ပြတတ်သည်။
အသားစမှ အူမကြီးကင်ဆာဟုအတည်ပြုပြီးနောက် ဆရာဝန်မှ ရင်ဘတ်ဓါတ်မှန် ကွန်ပြူတာဓါတ်မှန် သို့မဟုတ် စီတီ တို့ဖြင့် အဆုတ် အသဲ နှင့် ဝမ်းဗိုက်တလျောက်ရိုက်လိမ့်မည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းမှ ကင်ဆာမည်မျှပျံသွားသည်ကိုသိနိုင်သည်။ သွေးထဲမှ စီအီးအေ (ကာစီနီုအန်ဘရိုနစ် ပဋ္ဋိပစ္စည်း) အားစမ်းလေ့မရှိပါ။
Colon cancer (အူမကြီးကင်ဆာ) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကင်ဆာကုသမှုများသည် ကင်ဆာအမျိုးအစား အဆင့်ဘယ်လောက်(ဘယ်လောက်ပျံနှ့ပြီဖြစ်ကြောင်း) အသက် ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် အခြားအကြောင်းအရာများပေါင်းစပ်၍ အမျိုးမျီုးဖြစ်သည်။ ကင်ဆာအတွက် ကုသမှတခုမှမရှိသော်လည်း အူမကြီးကင်ဆာအတွက်ခွဲစိတ်ခြင်း ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်း ဓါတ်ရောင်ခြည်ပြခြင်းများလုပ်နိုင်သည်။
ကုသမှုသည် ကင်ဆာအားဖယ်ရန် နှင့် သို့မဟုတ် ကင်ဆာကြောင့်ဖြစ်သောနာကျင်ခြင်းအားသက်သာစေရန်ဖြစ်သည်။
ခွဲစိတ်ရာတွင် အူမကြီးတပိုင်းတစ သို့မဟုတ် တခုလုံးအားဖြတ်ထုတ်သည်။ ထိုသို့ဖြတ်ထုတ်ရာတွင် ကင်ဆာဖြစ်နေသောအူမကြိးနှင့် ကင်ဆာနှင့်ထိနေသော အနားသတ်နေရာများကိုလဲဖြတ်ထုတ်မည်။ အနီးအနားရှိ ပြန်ရည်အိတ်အားလည်းထုတ်လေ့ရှိသည်။ အူမကြီးဖြတ်ထုတ်သော ပမာဏအပေါ်မူတည်၍ ကျန်းမာသောအူမကြီးအပိုင်းအား စအို သို့မဟုတ် ဝမ်းဗိုက်ရှိ အပေါက်နှင့်တွယ်ဆက်လိုက်သည်။ နောက်တခုမှာ ဝမ်းဗိုက်အားဖောက်၍စအိုအတုပြုလုပ်ပြီး ဝမ်းအညစ်အကြေးများက ထိုစအိုအတုမှ တွယ်ထားသောအိတ်အတွင်းသို့ရောက်မည်။ စအိုအစစ်အားအသုံးမပြုတော့ပါ။
အချို့ကိစ္စများတွင် ဆရာဝန်သည် သေး၍ နေရာတကျရှိသောကင်ဆာဆဲလ်များအား မှန်ပြောင်းသုံး၍ ဖယ်ထုတ်နိုင်သည်။
ဝမ်းဗိုက်မှအပါက်ဖောက်သောခွဲစိတ်နည်း( ဝမ်းဗိုက်မှ အပေါက်သေးများပြုလုပ်အသုံးပြခြင်း) သည် ကြီးသော အလုံးများကိုဖယ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အချို့ခွဲစိတ်ချက်များက ကင်ဆာအဆင့်မြင့်သောသို့မဟုတ် ကုသ၍မရတော့သော ကင်ဆာများတွင် ရောဂါလက္ခဏာသက်သောစေရန်သုံးသည်။ ထိုသို့ခွဲစိတ်ခြင်းသည် အူမကြိးပိတ်ခြင်းအားသက်သာစေသည် သို့မဟုတ် အခြားအခြေအနေများ မဖြစ်လာစေရန် နာကျင်ခြင်း သွေးထွက်ခြင်း နှင့် အခြားလက္ခဏာများအားသက်သာစေသည်။
ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်းတွင် ဆဲလ်ပွားခြင်းကိုတားသော ပစ္စည်းများအားအသုံးပြုထားသည်-ပျက်စီးနေသောပရိုတင်းသို့မဟုတ် ဒီအန်အေ- ထိုကြောင့်ကင်ဆာဆလ်များအား ဖျက်ဆီးပြီးသေစေနိုင်သည်။ ဤကုသမှုသည် အမြန်ပွားနေသောဆဲလ်(ကင်ဆာဆဲလ်သာမက) အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော် ပုံမှန်ဆဲလ်များကဓါတုပစ္စည်းများကြောင့်ပျက်ဆီးခြင်းကိုပြန်ပွားနိုင်သော်လည်း ကင်ဆာဆဲလ်များကမပွားနိုင်ပါ။
ကင်ဆာဆေးသွင်းခြင်းသည်များသောအားဖြင့် ပျံနှံနေသော ကင်ဆာတွင် အသုံးပြုခြင်းများသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆိုဆေးများသည် ခန္ဓါကိုယ်အနှံသို့သွားနိုင်သည်။ ကုသမှုအား အချိန်စက်ဝန်းအလိုက်ပေးသောကြောင့် ဆေးနားထားသောအချိန်တွင် ခန္ဓါကိုယ်မှအနာကျက်ဖို့အချိန်ရသည်။ သို့သော် ဆိုးကျိုးများ ဥပမာ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်း ပျို့ခြင်း အားအင်ချို့တဲ့ခြင်း အန်ခြင်းတို့ဖြစ်တတ်သေးသည်။ ပေါင်းစက်ကုသမှု များကိုတခါတလေသုံးတတ်သည်။ ကင်ဆာဆေးများပေါင်းပေးခြင်း သို့မဟုတ် ကင်ဆာဆေးအားအခြားကုသမှုပုံစံဖြင့်ပေါင်းပေးခြင်းများလုပ်နိုင်သည်။
အချို့လေ့လာချက်များအရ နေ့တိုင်း အက်ပလင် အနည်းငယ်သောက်သုံးခြင်း အစာချေစနစ်ကင်ဆာရှိသောလူနာ ဥပမာ အူမကြီးကင်ဆာ ရှိသူများတွင် အသက်ရှင်နှုန်းပိုများသည်ဟုဆိုသည်။ ဆေးလုပ်ဆောင်ချက်အားကောင်းမွန်စွာနားမလည်ပေ။ ရောဂါကာကွယ်မှုအတွက် အက်ပလင်သောက်ခြင်းကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးလည်းကောင်းကောင်းမလေ့လာရသေးပါ။
ဓါတ်ရောင်ခြည်ပြခြင်း သည် ကင်ဆာဆဲလ်များက မြင့်အားများသော ဓါတ်ရောင်ဖြင့်ပြ၍ဖျက်ဆီးခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းကြောင့်ကင်ဆာဆဲလ်များအားပြုလုပ်ထားသော မော်လီကျူးများအားပျက်စီးစေပြီး သေစေသည်။
ဓါတ်ရောင်ခြည်ပြခြင်းတွင် အင်အားများသော ဂါမာအလင်းအား သတ္ထု သပမာ ရေဒီယမ် သို့မဟုတ် အင်အားများသော ဓါတ်မှန်များမှထွက်စေနိုင်သည်။ စတန်ဒလုံးကုသမှုဖြင့် အကျိတ်အား ရှုံစေခြင်း သို့မဟုတ် ကင်ဆာဆဲလ်အားဖျက်ဆီးခြင်းတို့ကိုလုပ်သည်။ အခြားကင်ဆာကုသချက်များနှင့်တွဲ၍ကုသနိုင်သည်။
ရောဂါအစောပိုင်းတွင် ဓါတ်ရောင်ခြည်ပြလေ့မရှိသော်လည်း စအိုကင်ဆာအစောပိုင်း စအိုကနံရံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်နေခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်ရည်ကြောအတွင်းရောက်နေပါက အသုံးပြုလိမ့်မည်။
ဆိုးကျိုးများမှာ အရေပြားအနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုများဖြစ်ခြင်း(နေလောင်ဒဏ်ရာနှင့်တူ) ပျို့ခြင်း အန်ခြင်း ဝမ်းလျောခြင်းနှုန်းခြင်းတို့ဖြစ်တတ်သည်။ လူနာများတွင် အစားအသောက်ပျက်တတ်ပြီး ပိန်သွားနိုင်သည် သို့သော် ဆိုးကျိုးအများစုသည် ကုသမှုအပြီး လပါတ်အနည်းငယ်ကြာတွင်ပျောက်သွားတတ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများကသင့်အနေဖြင့် စအိုကင်ဆာကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာအကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ဘာကိုမျော်လင့်ထားရမလဲကိုသိထားပါ။ သင့်ကင်ဆာအကြောင်းလေ့လာပြီး ကုသမှုဆုံးဖြတ်ချက်လုပ်နိုင်ပါစေ။
ဆရာဝန်အား ကင်ဆာ အမျိုးအစား အဆင့်နှင့် ကုသမှု ဆိုးကျိုးများအားမေးပါ။ ရောဂါအကြောင်းပိုသိပါက ကိုယ်တိုင်အတွက်ရွေးချယ်မှုလုပ်ရာတွင်ယုံကြည်မှုရှိလာလိမ့်မည်။ စာကြည့်တိုက် ဝက်ဆိုက်များမှ သိလိုသည့်အကြောင်းများရှာဖွေပါ။
သူငယ်ချင်းမိသားစုများနှင့်ရင်းရင်းနှီးနှီးနေပါ။ ထိုသို့နေခြင်းသည် ကင်ဆာကုသရာတွင် အကူအညီဖြစ်စေသည်။ သူငယ်ချင်းနှင့် မိသားစုများသည် သင်လိုအပ်ချက် ဥပမာ သင်ဆေးရုံတွင်ရှိချိန် သင့်အိမ်အားစောင့်ရှောက်ပေးခြင်းများပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့မှုများလည်ပေးနိုင်သည်။
စကားပြောဖော်ရှာပါ။ သင့်ကြောက်လန့်မှု မျော်လင့်ချက်များအားကောင်းမွန်စွာနားထောင်ပေးနိုင်သူကိုရှာပါ။ ထိုသူသည် သင့်သူငယ်ချင်းသို့မဟုတ် မိသားစုလဲဖြစ်နိုင်သည်။ နားလည်ပေးနိုင်သော ကျန်းမာရေးလုပ်သားများ ဆွေးနွေးအကြ့ပေးပညာရှင်များ သို့မဟုတ် ကင်ဆာရောဂါအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသောအဖွဲ့များကလဲ အကူအညီရနိုင်သည်။
ဆရာဝန်အား သင့်အနီးအနားတွင်ရနိုင်သော ကူညီသည့်အဖွဲ့များအားမေးပါ။ သို့မဟုတ် သင့်ဖုံးစာအုပ် စာကြည့်တိုက် သို့မဟုတ် ကင်ဆာအဖွဲ့အစည်းဥပမာ နိုင်ငံဆိုင်ရာကင်ဆာအဖွဲချုပ် သို့မဟုတ် အမေရိကန် ကင်ဆာအဖွဲ့။
Colon cancer. http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/colon-cancer/manage/ptc-20188388. Accessed July 13, 2017.
Colon Cancer: Causes, Symptoms, and Treatments. http://www.medicalnewstoday.com/articles/150496.php. Accessed July 13, 2017.
အူမကြီးကို သန့်စင်ပေးနိုင်တဲ့ သဘာဝဖျော်ရည် (၅) မျိုး
အူမကြီးကင်ဆာဝေဒနာသည် ဖခင်အတွက် ကုသမှု အစီအစဉ် ရေးဆွဲနည်း